Global Voices teny Malagasy · 25 Jolay 2019
25 Jolay 2019
Tantara tamin'ny 25 Jolay 2019
Mediam-bahoaka25 Jolay 2019
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana25 Jolay 2019
Fifidianana sy Kolontsaina
Tiako mba hankalaza ny faha-10 taonany ny Global Voices. Andrasako amim-panantenana ny hahita ireo sary rehetra sy handre ireo kinangananga avy amin'ny Fihaonambe manaraka. Ho eo am-panahy aho miaraka aminareo rehetra!
#MeToo ao Birmania : Fanadihadiana roa mamboraka ny fiantraikan'ny hetsika fanomezam-pitenenana ny vehivavy
Azia Atsinanana25 Jolay 2019
Mba handrosoan'ny zon'ny vehivavy, tsy maintsy iadiana ireo fomba fisaina tompomenakely toy ny « hpon », fotokevitra mametraka ny lehilahy ho ambony noho ny vehivavy.
Azia Atsimo25 Jolay 2019
Fantaro i Victoria Gimena Tinta Quispe, mpampiantrano ny kaonty @ActLenguas mandritra ny herinandron'ny 22-28 Jolay
Nanasa ireo mpampiantrano hitantana ny kaonty Twitter @ActLenguas sy hizara ny zava-niainan'izy ireo tamin'ny famelomana aina indray sy ny fampahafantarana ireo fitenindrazany izahay amin'ity taona 2019 ity. Fantaro ary i Victoria Gimena Tinta Quispe sy ny zavatra kinasany mandritra ny herinandro hitantanany ny kaonty. Rising Voices: lazalazao anay ny momba anao....
Lisitra feno ny tranonkala Lingua
Raha handray anjara amin'ny fandikan-teny Global Voices, misoratra anarana eto! Ary aza adinoina ny manaraka ny taratasim-baovao Lingua ! Mahaliana anao ve ny hanomboka tranonkalan'ny fiteny vaovao? Misorata anarana eto!
Momba ny RuNet Echo
Ny RuNet Echo dia tetikasan'ny Global Voices. Ny tena tanjon'ny tetikasa dia ny hanitatra sy hampivelatra ny fahatakarana ny aterineto Rosiana (RuNet) sy ireo vondrom-piarahamonina mifandray amin'ny aterineto.
Ny fahafatesan'i Hugo Chavez (2013)
Tamin'ny 5 Martsa 2013, taorian'ny 14 taona naha-filohan'i Venezoela azy no maty teo amin'ny faha-58 taonany i Hugo Chávez Frías. Niady tamin'ny homamiadana i Chávez nanomboka tamin'ny taona 2010. Tsy nahafahany nanao fianianana taorian'ny nahavoafidy azy indray ho amin'ny fe-potoana fahefatra tamin'ny volana Oktobra 2012 ny aretiny . Nankalazaina ho mpitsikera mafy...